Nzira yekuve nemuchato unofadza zvinoenderana neBhaibheri ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Maitiro ekuita muchato unofadza zvinoenderana neBhaibheri. Kune muKristu, roorano haingori nzira yekutungamira inobatanidza vanhu vaviri. Icho chiri pamusoro pechimwe chinhuwo zvacho. Mutendi anogara achiona iyo roorano semubatanidzwa pakati pevanhu vaviri vanodanana pamberi paMwari. Naizvozvo, nzira chete yekuti muchato ufare ina Kristu aripo.
Kuti tizive izvo Mwari anoda kubva muwanano yedu, isu tinofanirwa kutarisa pane Bhaibheri, sezvo isinga tsanangure izvo vaviri vanofanira kuita kuti imba yavo ifare.
1 Maitiro ekuve nemuchato unofadza nhanho nhanho
1.1 1. Jesu senzvimbo yemuchato
1.2 2. Iva akavimbika kune mumwe wako
1.3 3. Ratidza rukudzo
1.4 4. Isa zvido zvemumwe wako pamberi pako
1.5 5. Dzidza kuregerera uye kukumbira ruregerero
1.6 6. Iva nekutaurirana kwakanaka
1.7 7. Iva nokutsungirira
1.8 8. Gadza muenzaniso
Maitiro ekuve nemuchato unofadza nhanho nhanho
1. Jesu senzvimbo yemuchato
Jesu anofanira kugara ari pakati pe Matrimonio. Kuti uwane izvi, zvakakosha verengai bhaibheri munamate pamwe cheteKutsvaga kuda kwaMwari pakati penyu imi vaviri kunosimbisa imba yenyu uye kunobatsira iwe kutarisa pane chakanyanya kukosha.
2. Iva akavimbika kune mumwe wako
Chimwe chezviito zvakakosha mukati mewanano ndeche ramba wakatendeka kune mumwe wako. Bhaibheri rakazara nenyevero nezve njodzi yekusavimbika muwanano, sezvo a wanano yakatendeka inounza mufaro nekuropafadza pane muchato uzere nemanyepo nekutengesa.
3. Ratidza rukudzo
Unofanira kurangarira izvozvo mumwe wako munhu akakosha akasikwa mumufananidzo uye akafanana naMwari. Naizvozvo kana iwe you are disrespecting you are rurespecting Mwari.
4. Isa zvido zvemumwe wako pamberi pako
Nyika Inotidzidzisa kuzvitarisira isu nekuisa zvido zvedu pamberi pevamwe. Zvisinei, Bhaibheri rinotidzidzisa izvozvo tinofanira kutarisira muvakidzani wedu sekunge tiri isu pachedu.
Kana iwe uchinetseka kuti ungava sei nemuchato unofadza, yeuka izvo «mumwe nemumwe haangotarisiri zvido zvake asiwo zvido zvevamwes "(VaFiripi 2: 4).
5. Dzidza kuregerera uye kukumbira ruregerero
Mumuchato, imi vaviri muchaita zvinhu izvo mumwe wako zvaasingade. Nechikonzero ichi, zvakakosha kuti uzvininipise uye ukumbire ruregerero, sezvo pachave nenguva apo iwe paunokanganisa uye nevamwe apo mumwe wako paanokanganisa. Rangarira kuti hapana munhu akakwana.
Tsigirana uye regererai zvamakatadzirana. Regerera sekuregerera kwakaita Ishe.
6. Iva nekutaurirana kwakanaka
Muhukama sevanhu vaviri, zvido, zvinangwa uye zviroto zvevaviri zvinofanirwa kuzivikanwa. Iyo chete ndiyo nzira yekumisikidza zvaunoda neyavo. Naizvozvo, kutaurirana kwakanaka kunokosha muwanano.
Vanhu vaviri vangafamba pamwe chete kana vasingabvumirane?
7. Iva nokutsungirira
Pachave nenguva apo uchave nenguva yakaoma. Hapana hukama hwakakwana kubva pakutanga kusvika pakupedzisira, panogara paine mapundu, matambudziko uye akaomarara mamiriro. Nekudaro, Bhaibheri rinotidzidzisa kuti kana iwe uchinyatsoda kuva newanano inofadza, iwe unofanirwa murwire imba yenyu asingaregi. Nenzira iyi, iva nechokwadi chekuti Mwari achave newe.
Saka havachisiri vaviri, asi nyama imwe. Naizvozvo, izvo zvabatanidzwa naMwari, vaparadzanise.
8. Gadza muenzaniso
Iwe haugone kukumbira chero munhu kuti aite izvo iwe zvausingakwanise kuita. Kana iwe uchinyatsoda mumwe wako, usamumirira kuti atange kufamba nekuti anogona kunge achitarisira zvakafanana kubva kwauri. Naizvozvo, kuve nehanya uye kurima vamwe vanhu kuti uvachengete munzira kwayo.
Tinovimba matipi masere aya akubatsira kuti unzwisise kuva nemuchato unofadza zvinoenderana nebhaibheri. Iyo nzira haisi nyore, zvisinei, kana iwe uchikwanisa kutevedzera aya matipi, iwe uchaona kuti ichave yakave yakakosha sei.
Izvi ndizvo zvazviri! Kana iwe ikozvino uchida kuziva ndedzipi dziri mhedzisiro yechivi, ramba uchivhura tsvaga.online.